Ongakwenza izwe livalwe thaqa
UKUZIVOCAVOCA kungaba ngenye indlela yokuchitha isizungu ekhaya njengoba kungakhuthazwa ukuba uvanzi ngenxa yeCoronavirus Isithombe: THYBLACKMAN.COM
ZANELE MTHETHWA | March 25, 2020
UKUBHEDUKA kweCoronavirus (Covid-19), osekwenze ukuthi izwe livalwe thaqa abantu bahlale emakhaya, kulethe inselelo kwabanye ukuthi bangaluchitha kanjani usuku.
Ongoti bathi yize lesi sikhathi sizoba nzima kwabaningi, kumele impilo iqhubeke. Njengoba nezikole zizovalwa isikhathi eside, yithuba elihle lokuchitha isikhathi esiningi nezingane.
UNkk Dumisile Nala oyimenenja kwaChildline, unxuse abazali emakhaya ukuthi bazigade izingane. Ekhuluma esiteshini sethelevishini i-eNCA, uNkk Nala uthe kuyadingeka ukuthi izingane zifundiswe ngeCovid-19 kunokuthi zihlaliswe emakhaya kuphela.
Uthe kumele zifundiswe ngokulingana nomqondo wazo, kuqikelelwe ukuthi ziyazigeza izandla ngokufanelekile.
AbakwaToys R Us & Babies R Us abanezitolo ezidayisa amathoyizi kuzwelonke, bathe lesi sikhathi sokuzivalela emakhaya, akudingeki sihambisane nesizungu.
UNkk Catherine Jacoby wezokukhangisa, uthe lesi yisikhathi esihle sokuthi imindeni izithokozile ngokudlala. Uthe amathoyizi ayingxenye yokujabula, yingakho bebacabangele nabathengi babo.
“Siyakholelwa ukuthi singenza umehluko kulesi simo esimuncu esibhekene naso. Ukudlala nokuhleka kungandisa isikhathi sokuhleka,” kusho yena.
Uthe bakhuthaza ukuthi kuthengwe nge-internet kodwa abakhulelwe babekelwe isikhathi sokuthenga ezitolo esibizwa ngePregy Hour phakathi kuka-8:30 no-9:30 kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesine.
UKWENZA izinto ngokuhlanganyela njengokupheka, kuyawuqinisa umndeni okungaba yisikhathi esihle sokukwenza kulezi zinsuku Isithombe: CORBIS
Nanka amanye amathiphu okuchitha isizungu ngalesi sikhathi, acashunwe kwiHealth and Wellness.com:
* Umsebenzi wesikole
Yize izikole zivaliwe, leli kungaba yithuba elihle lokubheka umsebenzi wesikole ezinganeni. Ungakwazi ukusiza ingane lapho inezingqinamba khona emsebenzini wesikole. Ningaboleka noma nisebenzise izincwadi ezindala, ukujwayeza ukuthi ingane ikwazi ukufunda.
* Feza amaphupho
Kungenzeka ukuthi kade wafisa ukufeza iphupho lokubhala. Lesi yisikhathi esihle sokwenza lokho. Ungabhala incwadi noma izinkondlo, ongashicilela noma yinini uma usukulungele. Ukubhala izigameko zosuku nosuku, nakho kungakusiza ukuqongelela ongakubhala encwadini ngelinye ilanga.
* Ukufunda ukupheka
UNkk Donna Verrydt, ongumdidiyeli womncintiswano wokupheka iBud Battle, uthe ukupheka ndawonye nezingane kuyawuqinisa umndeni. Uthe yisikhathi esikahle sokuchitha isikhathi ekhishini niwumndeni. Ukubuka izinhlelo zethelevishini zokupheka, kungakusiza ukuzicija. Kukhona nama-website nezinkundla zokuxhumana ezifundisana ukupheka, nalokho kungakusiza.
* Amafilimu amadala
Akekho ongathi akanawo amaDVD anamafilimu amadala ekhaya. Njengoba imitapo yolwazi isivaliwe, kungakusiza ukubuyela ekhabetheni lakho ubheke amaDVD amadala. Lokhu kungasiza nokonga imali ebeniyichitha ema-cinema niyobuka amafilimu.
Izingane ziyakujabulela ukudlala nabadala, ikakhulukazi abazali. Lesi yisikhathi esihle sokufundisana imidlalo emnandi ndawonye. Eminye imidlalo ikhona nakwi-internet nakumaselula.
Zibekele isikhathi sokuzivocavoca usuku nosuku. Ukuzivocavoca ndawonye namanye amalungu omndeni kungakunika umfutho. Nakhona zikhona izinkundla zokuxhumana ezikhombisa izitayela zokuzivocavoca, noma nisebenzise lezi enizaziyo.